Adobe Fresco dia natomboka tamin'ny 24 septambra ary afaka mitahiry azy izao | Famoronana an-tserasera
Azonao atao izao ny mitahiry ny fampiharana sary vaovao Adobe Fresco
Efa niresaka momba ny Adobe Fresco tamin'ny androny isika ary niandry azy ho fampiharana io izahay manao sary izay hanahaka ny fihetsiky ny borosy vita amin'ny watercolor na miaraka amina karazana fitaovana hafa.
Androany izahay dia afaka milaza fa efa afaka mitahiry izany ianao amin'ny 24 septambra dia natomboka izy io. Rindrambaiko iray izay mikendry ny hanahaka ny traikefa nomen'ny borosy iray misy menaka amin'ny volony. Tanjon'ny Adobe noho ny fahaizan-tsaina Adob ​​Sensei.
Amin'izao fotoana izao dia hijanona irery ho an'ny kinova iPad ary ny valin'ny fampiharana Procreate malaza amin'ny iOS. Amin'izao fotoana izao no ahafahanao mitahiry ny Adobe Fresco ao amin'ny App Store izay ahitanao azy maimaim-poana.
Antsoina hoe Project Gemini tamin'ny voalohany izy io, fampiharana izany mifantoka amin'ny famoronana indray ny fahatsapana mitovy azonao atao sary na loko amin'ny fitaovana ara-nofo na nentim-paharazana. Midika izany fa afaka manindry ianao ary amin'ny fihetsika na kapoka hafa dia azonao atao ny mamorona endrika toa ny fanaonao amin'ny akrilika, loko na menaka.
Fresco mirehareha amin'ny fanolorana ny fanangonana borosy lehibe indrindra eto an-tany avy amin'ny app anao. Ary ankoatra ny fanahafana ireo fitaovana nentim-paharazana kokoa, dia azontsika atao ny mampiasa ny safidy hanambatra ny iray sy ireo mifantoka amin'ny vongana mba hankafizany ny zavatra niainany tamin'io lamba io ihany.
Midika izany fa te-hanakambana izay efa hatrizay hatrizay tamin'ny fanaovana sary tamin'ny nentin-drazana tamin'ny digital nomerika izay efa nahazatra antsika izy ireo. Ny manaitra dia Fampidirana an'i Sensei, Vondron-tsaina artifisialy sy haitao an'ny Adobe.
Ny asan'ny Adobe Fresco dia hanampy hanahaka izany fahatsapana izany ny hosodoko amin'ny borosy tena izy na amin'ny saribao mitovy amin'ny pastia sepia. Midika izany fa hanana fiainana manokana ny fanasana lamba raha toa ka azo ampiasaina ny menaka toa ny akora mitovy.
Azonao atao ny mitahiry azy avy amin'ity rohy ity ao amin'ny Adobe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Azonao atao izao ny mitahiry ny fampiharana sary vaovao Adobe Fresco
Rehefa manandrana misarika ny alikanao ianao dia lasa fironana izany
Taratasy ho an'ny tatoazy